Olana eto amin’ ny firenena : Ny fifidianana ihany no vahaolana hoy ny CENI -
AccueilSongandinaOlana eto amin’ ny firenena : Ny fifidianana ihany no vahaolana hoy ny CENI
Olana eto amin’ ny firenena : Ny fifidianana ihany no vahaolana hoy ny CENI
Tranga telo miaro datim-pifidianana telo no soso-kevitra naroson’ ny birao mahaleo tena misahana ny fifidianana omaly, anisan’izany ohatra ny mahakasika ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena mialohan’ ny fotoana, izay ny datin’ny alarobia 29 ny volana aogositra no nomen’izy ireo. Anton’io raha ny fanazavana izay nentin’ ny filohan’ ny CENI, dia ny andininy faha-52 anatin’ny lalàm-panorenana, izay mamaritra ny fahafahana manatanteraka ny fifidianana mialohan’ny fotoana. Ny daty faharoa kosa dia ny faha-28 ny volana novambra, izay daty ahafahana manatanteraka ny fifidianana fihodinana voalohany . Io indray dia nosintonina ao amin’ ny andininy faha-47 amin’ny lalàm-panorenana araka ny fanazavana izay nomen’ny bâtonnier Hery Rakotomanana hatrany. Misy ihany koa ny fepetra izay miara-dalana amin’io daty io, satria mba ahafahana manatanteraka izany dia ilaina mazava mandritra ity volana ity ny lalàm-pifidianana sy ny fandaminana ara-politika. Ny daty fahatelo avy amin’ ny CENI kosa dia ny faha-29 ny volana mey, io indray dia araka ny voasoratra amin’ ny andalana fahefatra ao amin’ny andininy faha- 47 ihany mikasika ny fanemorana ny datim-pifidianana.
Nanamarika ny CENI nandritra ny fanambarany ireo soso-kevitra ireo fa tsy tokony handalo fotoan-tsarotra ny firenena izay hampivandravandra indray ny fahasahirana eo amin’ ny vahoaka, noho izany hoy izy ireo dia tsy misy afa-tsy ny fanatanterahana fifidianana madio,mangarahara no vahaolana tokana hitondra an i Madagasikara amin’ny filaminana sy ny fandrosoana maharitra. Noho izany hoy ny CENI dia tsy ilaina ny fepetra hametrahana fitoniana, satria dia ilaina izany amin’ny fanatanterahana io vahaolana io. Ka noho izany « dia niangavy ireo tompon’andraikitra politika isan-tsokajiny izy ireo sy izay rehetra mahatsiaro fa manana adidy amin’ny tanindrazana, mikasika izao toe-draharaha izao , mba hiara-hidinika , ka handray fanapahan-kevitra…… ary indrindra ihany koa amin’ ny fametrahana ny fitoniana ». Nandritra ny fanazavana moa no nanamafisan’ny filohan’ ny CENI fa mahaleo tena tanteraka izy ireo, ary ny lalàm-panorenana sy ny lalàna manan-kery ihany no mibaiko ny ataony sy ny asany.
Manoloana ity fanazavana izay nentin’ ny CENI ity, dia nisy ny fanontaniana ny mpahay Lalàna, amin’ ny fahafahana manatanteraka ireo soso-kevitry ny CENI ireo, anisan’ny natonina tamin’izany i Maharante Jean de Dieu. Nohazavain’ ity farany fa sambany isika mampihatra ny lalàm-panorenana , satria dia sori-dalana no narahina tamin’ izany, hita izao hoy izy fa sarotra ny mampihatra azy. Raha ny fanazavana izay nomeny ihany dia ny hoe tokony hamita ny fotoam-piasana ny Filoham-pirenena, nefa dia mandringa ihany izany satria voalazan’io lalàm-panorenana io ihany fa mametra-pialana mialoha ny filoha, ary midika izany fa tsy ampy ny dimy taona. Manaraka izany dia nohazavain’ ity mpahay lalàna ity ihany fa raha kotiana ny voalazan’ny lalàna dia ny 24 ny volana septambra ny filoha no tokony hametra-pialana araka ny lalàm-panorenana ihany, isika izao volana Mey ary midika izany fa efa-bolana sisa izany. Noho izany dia ilaina ny manaraka ny lalàm-panorenana, satria isika dia efa nahazo ny fahatokisana tamin’ny sehatra iraisam-pirenena , noho ny fisian’ny fifandimbiasam-pahefana. Ka noho izany dia tokony hajaina ireo voalazan’ny lalàna rehetra.